स्वास्थ्य – Rajdhani Daily
डा. प्रकाश बुढाथोकी गर्मी र वर्षायाम सुरु भएसँगै सर्पदंशका बिरामी बढ्छन् नै किनभने यो समयमा सर्प जमिनबाहिर निस्कन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपपश्चात् सर्पको बासस्थान नष्ट भएपछि मानिसको बासस्थानतिर छि...
पिनास प्रायः सबै मानिसलाई सताउने सामान्य रोग हो । तर, यसको समयमै उपचार गरिएन भने यसले खतरनाक अवस्था निम्त्याउन सक्छ । पहिलो कुरा त यो रोग नाक, कान र घाँटी जस्ता संवेदनशील अंगसँग सम्बन्धित छ । द...
अस्पष्ट ‘प्रेस्क्रिप्सन’बाट बिरामी जोखिममा, तोकेरै औषधि पसलमा पठाउने गरेको गुनासो
काठमाडौं । चिकित्सकले स्पष्ट बुझिने भाषामा प्रेस्क्रिप्सन नलेख्दा बिरामीहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा लेखिने ‘प्रेस्क्रिप्सन’मा औषधि...
बिरामी मानिसको सहारा औषधि हो । यो बिरामीका लागि अन्तिम तथा निर्विकल्प बाध्यता पनि हो, बाँच्नका लागि । बिरामीका लागि उपचारमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, औषधि सेवनका विधि र तरिका हुन्छन् । च...
मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने ? (स्वास्थ्य टिप्स)
विभिन्न अंग मिलेर बनेको हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो, मुटु । मुटु हाम्रै शरीरमा भएर पनि स्वचालित हुन्छ । यसले मानिस बिरामी होस् वा स्वस्थ, एक क्षण पनि काम गर्न छोड्दैन । सेकेन्डभर पनि मुटुल...
चिकित्सकपिच्छे एउटै बिरामीलाई फरक फरक औषधि
काठमाडौं । २४ वर्षीय रविन भण्डारी छाती दुख्ने समस्या भएपछि काठमाडौंस्थित एक अस्पतालमा पुगे । उनलाई ‘चेस्ट पेन’ भएको भन्दै चिकित्सकले औषधि खान सल्लाह दिए । उनले चिकित्सककै सल्लाहअनुसार औषधि सेवन गरे । ...
कालाजार र यसबाट बच्ने उपाय (स्वास्थ्य टिप्स)
विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएअनुसार विश्वको कूल जनसंख्याको करिब ३५ करोड २० लाख मानिस कालाजारको रोगले छोएका छन् । कालाजार प्रभावित यो संख्यामध्ये करिब १ करोड ३० लाख विरामी यो रोगको उच्च जोखिममा छ...
मोतीबिन्दुबाट बच्ने उपाय (स्वास्थ्य टिप्स)
जनसाधरणले मोतीबिन्दुुु बुढेसकालमा लाग्ने रोगका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । उमेर ढल्कदै जाँदा मात्र यो रोग लाग्छ भन्ने सोचाइले धेरै मानिसलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । किनकि उनीहरूले यो रोग भिन्न भिन्न...
ओम बानियाँ ‘डा. साब ! पेट र मानसिक स्वास्थ्यको के सम्बन्ध छ ?’ निर्मलले प्रश्न गरे । डा. कोर्टेक्सले केही कदम अगाडि बढेर भने, ‘निर्मलले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । निश्चित रूपमा पेट र मानिसक ...